Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Nihaona indray ny indostrian'ny dia tao amin'ny WTM London
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • fivoriana • Vaovao • People • Tourism • Travel Wire News • Vaovao farany momba ny UK
Ny fanangonana lehibe indrindra amin'ireo matihanina amin'ny indostrian'ny fitsangatsanganana eran'izao tontolo izao hatramin'ny nanombohan'ny areti-mifindra no sehatra tonga lafatra ho an'ny fanarenana amin'ny taona 2022. Ny seho dia nahitana fivorian'ny orinasa maro, fihaonambe feno hevitra ary valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety.
Niverina ihany ny fampisehoana ara-batana WTM London!
Ny fanokafana WTM London dia natao tamin'ny fomba ofisialy niaraka tamin'i HE Ahmed Al Khateeb, Minisitry ny Fizahantany any Arabia Saodita; Fahd Hammidaddin, Lehiben'ny Mpanatanteraka ao amin'ny Saodiana Tourism Authority; Hugh Jones dia nantsoina ho Tale Jeneralin'ny RX Global ary Princess Haifa AI Saud, Minisitry ny Fizahantany ao Arabia Saodita.
Ny andro voalohany amin'ny fampisehoana dia nandray ny fampirantiana avy amin'ny firenena sy faritra maherin'ny 100, mpividy mihoatra ny 6,000 voasoratra anarana avy amin'ny firenena 142 ary matihanina amin'ny dia avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao.
Ny fizahantany tompon’andraikitra no lohahevitra fototra tamin’io andro io. Amin'ny maha-hetsika manerantany lehibe indrindra ho an'ny indostrian'ny fitsangatsanganana, ny WTM London dia nandresy ny anton'ny fizahan-tany tompon'andraikitra ary ny WTM Responsible Tourism Awards isan-taona dia nankalaza ny tsara indrindra amin'ny dia amin'ny sokajy - ny lisitry ny mpandresy dia havoaka anio maraina.
Ny tanora kokoa dia mitodika any amin'ny mpandraharaha fitsangatsanganana mba hamandrika fialantsasatra noho ny fisafotofotoana sy ny olana hita mandritra ny areti-mifindra, araka ny tatitry ny indostrian'ny WTM.
Ny fanadihadiana nataony tamin'ny mpanjifa 1,000 dia nahita fa ny 22% amin'ireo 35-44 taona dia nilaza fa mety hampiasa mpandraharaha izy ireo, miaraka amin'ny 21% amin'ireo 22-24 taona ary 20% amin'ireo 18 ka hatramin'ny 21 taona.
Simon Calder, mpanao gazety fitsangatsanganana hajaina, dia nanolotra ireo sy ireo vokatra tsara maro hafa avy amin'ny Tatitry ny indostrian'ny WTM tamin'ny andro voalohany tamin'ny hetsika.
Hitan'ny tatitra ihany koa fa avo efatra heny noho ny fijanonana ara-toekarena amin'ny taona ho avy ny mpiala sasatra.
Saika ny ampahatelony (32%) amin'ireo mieritreritra fialan-tsasatra any ampitan-dranomasina amin'ny 2022 no mety hamandrika fialantsasatra amin'ny fonosana, raha ampitahaina amin'ny 8% izay hamandrika amin'ny alàlan'ny tranokalam-pizarana ara-toekarena, toy ny Airbnb.
Hoy i Calder tamin'ireo solontena: “Mahazo fitarainana isan'andro avy amin'ireo olona nanao dia lavitra aho na tamin'ny fampiasana ny iray amin'ireo masoivoho fitsangatsanganana an-tserasera tsy dia malaza loatra.
"Ny fampiasana orinasa fonosana dia tsara kokoa ary ny fampiasana mpandraharaha fitsangatsanganana mivantana dia midika fa tsy hamela anao ho tafahitsoka izy ireo. Ny fisafotofotoana rehetra dia manosika ny olona hampiasa ny fitsangatsanganana. ”
Rehefa nanontaniana ny mpanjifa momba ny toerana tiany haleha, dia i Espaina no toerana mafana indrindra, arahin'ireo ankafizin'ny Eoropeana nentim-paharazana hafa toa an'i Frantsa, Italia ary Gresy, ary Etazonia - izay hisokatra indray ho an'ny mpiala sasatra britanika amin'ny 8 Novambra rehefa tsy voafetra hatramin'izay. Martsa 2020.
Ny tatitra ihany koa dia nanambara fa ny ankamaroan'ireo matihanina ara-barotra 700 nanontaniana momba ny tatitra dia manantena ny varotra 2022 hifanaraka na handresy amin'ny 2019.
Fanampin'izany, efa ho 60% amin'ireo mpanatanteraka fitsangatsanganana no mino fa ny faharetana no laharam-pahamehana amin'ny indostria.
Calder ihany koa dia nanao fifanakalozan-kevitra momba ny olana nateraky ny fikarohana.
John Strickland, manam-pahaizana momba ny fiaramanidina WTM, dia nilaza fa ny mpitatitra mora vidy toa an'i Ryanair sy Wizz Air dia nahita tarehimarika fifamoivoizana tsara kokoa fa ny zotram-piaramanidina toa ny British Airways sy Virgin Atlantic, izay miantehitra amin'ny lalana lavitra sy transatlantika, dia naharitra ela kokoa vao niverina.
Notanisainy ny vinavinan'ny IATA izay nilaza fa tsy hiverina amin'ny ambaratonga mialoha ny areti-mifindra raha tsy amin'ny 2024 ny fifamoivoizana.
Ary koa, tsy mieritreritra izy fa hiverina amin'ny fomba nanaovan'ny tsena izany ho an'ny fialam-boly sy fitsidihana namana sy havana.
Na izany aza, Tracey Halliwell, Talen'ny fizahantany, Fivoriambe & Hetsika lehibe ao London & Partners, dia nilaza fa misy fantsona "matanjaka" ho an'ny fizahan-tany ara-barotra sy hetsika lehibe eto an-drenivohitra.
"Manantena aho fa hiverina amin'ny toerany ambony i London," hoy izy.
Ny fitsangatsanganana fialamboly dia hihoatra noho ny tsy fahampian'ny fizahan-tany ara-barotra satria hisy "bleisure" bebe kokoa, izay hahitan'ny olona manampy singa fialan-tsasatra amin'ny diany miasa, hoy i Halliwell.
Harold Goodwin, manam-pahaizana momba ny fizahantany tompon'andraikitra ao amin'ny WTM, dia nilaza fa mila fehezina ny sehatry ny fiaramanidina, raha tsy hoe manapaka ny dian'ny karbônina, hoy izy nampitandrina.
Rehefa mi-decarbonize ny sehatra hafa, dia ho lasa ampahany betsaka amin'ny etona ny fiaramanidina eran-tany, hiakatra 24% eo ho eo amin'ny 2050 raha mitohy ny fironana ankehitriny.